Home Horyaalka Ingiriiska Raheem Sterling iyo Xidig kale oo qarka u saaran heshiis cusub
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay qandaraas cusub kasiiso Raheem Sterling garoonka Etihad ka dib markii Pep Guardiola uu mustaqbalkiisa u hibeeyay Citizens.
Guardiola ayaa lala xiriirinayay inuu si layaableh ugu laabanayo Barcelona bilihii xagaaga, laakiin macalinka reer Spain ayaa haatan qalinka ku duugay heshiis cusub oo uu kula sii joogayo City ilaa 2023.
Iyadoo mustaqbalka tababaraha la sugay, kooxda Premier League ka dhisan ayaa lagu soo waramayaa inay u weecatay kooxda dhanka qaar ka mid ah xidigaha kooxda kuwaasoo laga yaabo inay qandaraasyo cusub saxiixaan.
Sterling waa mid ka mid ah kuwa rajeyn kara mushahar kordhin weyn oo hor leh, sida laga soo xigtay The Mirror , oo sheeganeysa in City ay si aad ah u dooneyso inay 25 jirkaan heshiiskiisa cusub.
Kevin De Bruyne waa ciyaaryahan kale oo afarta jeer ku guuleysatay Premier League ay sidoo kale raadinayaan inay heshiiska u kordhiyaan, iyadoo ciyaaryahanka reer Belgium uu xaqiijiyay inuu doonayo inuu sii joogo Manchester, wadahadalada heshiis cusub ee 29 jirkaan ayaa la filayaa inay si habsami leh u socdaan
Sterling, oo weli seddex sano ay uga harsan tahay qandaraaskiisa haatan ee Etihad, ayaa durbaba sameeyay shan gool iyo afar caawin tartammada oo dhan City xilli ciyaareedkii 2020-21.
Previous articleAabaha Erling Braut Haaland oo ka hadlay wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan weeraryahanka Borussia Dortmund
Next articleManchester United oo guushii ugu horeesay ee gurigeeda ka gaartay West Brom.